रोनाल्डोले आफ्ना होटललाई बनाए अस्पताल, कोरोना संक्रमितको सित्तैमा उपचार गरिने
नेपाल लाइभ आइतबार, चैत २, २०७६, १०:५२
काठमाडौं- पोर्चुगलका फुटबल स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफ्ना होटल/रेस्टुरेन्टलाई अस्पतालमा रुपान्तरण गरेका छन्। जसमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सित्तैमा उपचार हुने बताइएको छ।
कोरोनाको संक्रमण फैलँदै जाँदा विश्व खेलकुद गतिविधि प्राय ठप्प छन्। ठूला लिग फुटबलहरु रोकिएका छन्। प्रतियोगिताका मिति सारिएका छन्। केही खेलाडी र प्रशिक्षकमा नै कोरोना देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ।
१ सय ३५ देशका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको कोरोनाका कारण विश्वमा १ लाख ४२ हजार ५ सय ४९ जनामा संक्रमण देखिइसकेको छ। जसमा ५ हजार ३ सय ९३ जनाको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
फुटबल खेलाडीलाई रंगभेदी सन्देश पठाउने किशोर पक्राउ इंग्लिस प्रिमियर लिग क्लब क्रिस्टल प्यालेसका खेलाडी विल्फर्ड जाहालाई सामाजिक सञ्जालमा रंगभेदी सन्देश पठाउने एक १२ वर्षका किशोरलाई प्... सोमबार, असार २९, २०७७
म्यानचेस्टर सिटीमाथिको प्रतिबन्ध के होला? खेल्न पाउला च्याम्पियन्स लिग? इंग्लिस फुटबलमा यो सिजनकै सबैभन्दा ठूलो खबर हो- म्यानचेस्टर सिटीमाथिको युरोपियन प्रतिस्पर्धाबाट प्रतिबन्ध। आज त्यही प्रतिबन्ध यथावत... सोमबार, असार २९, २०७७
आर्सनलमाथि टोटनह्याम विजयी आइतबार राति भएको खेलमा घरेलु टिम टोटनह्यामले आर्सनलमाथि २-१ गोलको जित निकालेको हो। टोटनह्यामको जितमा सन हुङ मिन र टोबी अल्डेरवेइरेल्... सोमबार, असार २९, २०७७